China QDF-400 WP Rafitra famokarana mitohy an'ny Jet Mill Ho an'ny orinasa 400kg sy mpanamboatra | Qiangdi
Ny tsipika WP malaza indrindra ao amin'ny rafitra famokarana mitohy Pakistan-QDF-400 toy ny etsy ambany ny sary sy ny sary
Voalohany, sakafo ara-nofo avy amin'ny mpamatsy - ny famindrana fitaovana mankany amin'ny 3 m voalohany3mixer ho an'ny premixing, ary mpanangona vovoka dia hanangona vovoka mandritra ny fizotran'ny sakafo, avy eo ny 3m3fivarotana hopper mifangaro fitaovana, avy eo miditra amin'ny fikosoham-bary ho an'ny fikosoham-bary, ny haben'ny sombin-output dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny kodiarana. Aorian'ny fikosehana, ny fitaovana dia hamindra amin'ny siklôna amin'ny alàlan'ny herin'ny centripetal an'ny mpankafy sy mpanangona vovoka eo an-tampon'ny 4m voalohany3 mixer, avy eo afindra amin'ny 4m faharoa3 mixer kofehy marindrano ho an'ny fampifangaroana alohan'ny fonosana na famindrana amin'ny rafitra WDG.
Fampidirana antsipiriany ho an'ny tsipika WP iray manontolo
Rafitra loharanon-drivotra- compresseur rivotra, fanalana solika, fitoeram-pitehirizana rivotra, fanamainana mangatsiaka, fanivana marina.
Compressor dia ampiasaina hanerena rivotra, sehatra tokana, atsindrona solika ary entin'ny motera, izay misy ny fiafaran'ny rivotra, motera, Separatoran'ny solika / gazy, cooler solika, cooler de rivotra, fan (ho an'ny karazana rivotra ihany), fandrika hamandoana, Kabinetra fanaraha-maso herinaratra, fantsom-panafody, fantsom-pitrandrahana solika ary fantson-drano (ho an'ny karazana tsy misy rano fotsiny), rafitra fanaraha-maso. Misy rotors mifangaro ao anaty casing. Ny rotor lahy dia manana nify 4, ny rotor vavy dia manana 6 nify. Ny rotor vehivavy dia arahin'ndrana lehilahy amin'ny hafainganana haingana. Miaraka amin'ny fifindran'ny nify kely eo anelanelan'ny rotors 2, ny rivotra avy amin'ny sivana miditra sy ny diloilo fanosorana avy amin'ny casing dia voafintina tsindry amin'ny tsindry avo. Rehefa mahitsy mankany amin'ny seranan-tsambo ny fifindran'ny nify, dia mifangaro avy amin'ny seranana fivoahana ny fifangaroan'ny rivotra / solika, avy eo mikoriana ao anaty Separatoran'ny solika / gazy hampisaraka ny solika amin'ny rivotra. Manaraka izany, mikoriana ny rivotra amin'ny alàlan'ny valizy faneriterena faran'izay kely indrindra, rivotra mangatsiaka kokoa ary fandrika hamandoana, farany mankany amin'ny fantsom-pandefasana rivotra. Ny menaka misaraka dia milatsaka amin'ny fanambanan'ny mpampisaraka, avy eo mikoriana mankany anaty mangatsiaka kokoa ny menaka, sivana menaka ary farany miverina amin'ny rivotra noho ny fampiasana fanodinana vokatry ny tsindry samihafa.
Rivotra mafana sy mando ary mangatsiaka hiditra amin'ny mpivarotra hafanana mialoha ny hatsiaka (ny etona mivoaka avy amin'ny rivotra voahidy mangatsiaka ho fifanakalozana hafanana) mba hampihenana ny enta-mavesatra, rehefa manafana ny rivotra voafatotra avoaka amin'ny hatsiaka, lavitra ny mahavoky. Avy eo miditra ny evaporator dia nampangatsiahina hatrany hatramin'ny 12 ℃ eto ambany, ny fidirana indray amin'ny mpampisaraka dia ho tototry ny fizotran'ny fampangatsiahana rano dia natokana, fanariana fitaovana ambanin'ny Shui ao an-tendrombohitra. Avy amin'ny rivotra mangatsiaka maina amin'ny hafanana navoakan'ny mpampita hafanana alohan'ny hatsiaka.
Kitapo fitahirizana rivotra
tanky fitahirizana rivotra (sambo fanerena), fantatra ihany koa amin'ny tanky fitehirizana rivotra voadidy, dia fantsona faneriterena izay ampiasaina manokana amin'ny fitehirizana ny rivotra voahidy. Ampiasaina matetika izy io amin'ny fitehirizana buffer gazy, ary mitana ny toeran'ny fanamafisana ny tsindry amin'ny rafitra, mba hialana amin'ny famoahana sy famoahana ny compresseur rivotra ary fanalana ny rano be indrindra. Ny fitoeran-tsolika fitehirizana entona dia mazàna amin'ny vatan'ny vatan-doha, loha, flange, fantsom-baravarankely, singa sy famehezana ary faritra sy singa hafa. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny valizy azo antoka, fandrefesana, valizy ary kojakoja hafa mba hamenoana ny andraikitry ny fizotry ny famokarana samihafa.
Ampahany lehibe-jisika fanodinana sy rafitra fampifangaroana & vovoka
Ny vokatra dia pulverizer fandriana mihena miaraka amin'ny rivotra famatrarana ho mpanelanelana. Ny vatan'ny fikosoham-bary dia mizara ho fizarana 3, dia ny faritra fanorotoroana, ny faritra fandefasana ary ny faritra naoty. Ny Grading Area dia omena ny kodiarana fitetezana, ary ny haingam-pandeha dia azo ahitsy amin'ny mpanova. Ny efitrano fanorotoroana dia misy ny bontolo fanosehana, mpamatsy sakafo sns. Ny kapila famatsian-tseranana ivelan'ny vatom-panosehana dia mifandraika amin'ilay tsindry fanorotoro.
Mill mill- eo ambanin'ny asan'ny herin'ny centrifugal ny kodiarana fanasokajiana sy ny herin'ny centripetal an'ny mpankafy, ny fitaovana dia lasa fandriana tsiranoka ao anaty milina fitotoana jet.
Rafitra fanaraha-maso PLC- Ny rafitra dia mampiasa fanaraha-maso efijery manan-tsaina, fandidiana mora ary fanaraha-maso marina. Ity rafitra ity dia mandray ny maodely fanaraha-maso ny efijery PLC +, ny écran dia ny terminal fiasan'ity rafitra ity, noho izany, tena zava-dehibe tokoa izy io.raha ny fahafantarana tsara ny asan'ny lakile rehetra eo amin'ny efijery mikasika ny fiasa mba hiantohana ny fiasan'ity rafitra ity.
Top feeder-Mifandray mora amin'ny mpanangona vovoka mba hialana amin'ny fivoahan'ny vovoka, azo alaina amin'ny sakafo.
Separator sy mpanangona vovoka–Ny vokatra fanangonana sy fanangonana vovoka dia manaparitaka ny torolàlana momba ny fikorianan'ny akora ary hisorohana ny fanangonana fitaovana. Ataovy azo antoka ny fanodinana vovoka amin'ny dingan'ny famokarana mba hamenoana ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana amin'ny famokarana madio sy ny famoahana setroka.
Mpangaro visy kambana -manana famolavolana fikororohana lava sy volo, izay mitazona ny fampifangaroana tanteraka ny fitaovana tsy hipetraka eo ambanin'ny asan'ny revolisiona sy ny fihodinana.
Twin screw mixer dia mampifangaro vovoka, granule ary fampifangaroana rano. Ny fihodinan'ny mixer vita amin'ny kambana dia vita amin'ny alàlan'ny motera sy ny reducers cycloid. Miaraka amin'ny fampifangaroana asymmetrika amin'ny visy roa, ny halaviran'ny fikolokoloana dia hohitatra ary ny hafainganam-pandeha dia hihazakazaka. Ny masinina fampifangaroana dia avoakan'ny boribory roa tsy simetrika amin'ny fihodinana haingana, izay mamorona tsanganana miolikolika tsy simetrika roa izay miakatra ambony avy amin'ny rindrina varingarina. Ny sandry mitodika atosiky ny orbit spiral, dia mahatonga ny spiral material amin'ny ambaratonga samihafa ho lasa stud ao anaty valopy, ny ampahany amin'ny fitaovam-panentanana dia avoaka, ny ampahany hafa amin'ilay fitaovana dia atsipy volo, mba hahatratrarana ireo fitaovana feno boribory feno havaozina tsy tapaka.
Mpifangaro kofehy boribory marindrano-Mety kokoa ny manao vokatra sasany izay mila manampy adjuvant na zavatra simika hafa amin'ny vokatra vita. Ary ny fampifangaroana dia tsara kokoa sy marina kokoa noho ny mixer visy kambana. ambany ny haavon'ny vatana noho ny mixer visy Twin, mora apetraka.
Fizarana hafa –Drafitra mpankafy sy mpanadio rano
Drafitra mpankafy- Ataovy eo ambanin'ny tsindry ratsy ny rafitra WP iray manontolo amin'ny alàlan'ny herin'ny sentrifugal an'ny drafitra mpankafy, amin'izay dia avelao ny fitaovana hanorotoro sy hamoaka gazy avy amin'ny rafitra fitotoana.
Mpanadio rano- ambany noho ny vovoka 0,5um dia miditra ao anaty «scrubber» ary tototry ny soson-tsarimihetsika ao anaty rano, ariana miaraka amin'ilay vodin-drano ambanin'ny rano. hisorohana ny tontolo iainana mandoto vovoka.
Ny entona misy vovoka dia ampidirina manaraka ny làlana azo antoka avy amin'ny tapany ambany amin'ny varingarina ary mihodina. Ny vovoka vovoka dia sarahina amin'ny hery empira ary atsipy amin'ny rindrina anatiny amin'ny varingarina. Izy ireo dia voan'ny tabilaon'ny sarimihetsika rano mikoriana ao amin'ny rindrina anaty varingarina ary alefa amin'ny alàlan'ny fivoahan'ny vovoka miaraka amin'ny vodin-tsiran'ny rano mikoriana. Ny sarimihetsika rano dia noforonina amina vazaha maromaro namboarina teo amin'ny tapany ambony amin'ny varingarina mba hofafazana. ny rano amin'ny rindrin'ny fitaovana. Amin'izany fomba izany, ny rindrina anaty varingarina dia mandrakotra sarimihetsika anaty rano manify mihodina hatrany hatrany hahatratra ny tanjon'ny fanatsarana ny vokatra fanesorana vovoka.
Teo aloha: Rafitra Jet Mill WP – Ampiharo amin'ny saha agrochemical